ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ ၌ ကျင်းပသော အာရှချန်ပီယံရှစ် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၂ တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ကြက်တောက်ရိုက်ချက်များ (ဆင်ဟွာ) - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ ၌ ကျင်းပသော အာရှချန်ပီယံရှစ် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၂ တွင် အမျိုးသား တစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်၌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံမှ Anthony Sinisuka Ginting နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ Nishimoto Kenta တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေသည်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ ၌ ကျင်းပသော အာရှချန်ပီယံရှစ် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၂ တွင် အမျိုးသားနှစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်၌ တရုတ်နိုင်ငံမှ Liu Yuchen (ညာ)/ Ou Xuanyi နှင့်အင်ဒိုနီးရှားမှ Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေသည်ကို ဧပြီ ၂၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ ၌ ကျင်းပသော အာရှချန်ပီယံရှစ် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၂ တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်၌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ Anthony Sinisuka Ginting နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ Nishimoto Kenta တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေသည်ကို ဧပြီ ၂၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ ၌ ကျင်းပသော အာရှချန်ပီယံရှစ် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၂ တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han တို့နှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပူးတွဲယှဉ်ပြိုင်ရသောပွဲစဉ်၌ ဂျပန်နိုင်ငံမှ Watanabe Yuta (ယာ)/Higashino Arisa တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေသည်ကို ဧပြီ ၂၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ ၌ ကျင်းပသော အာရှချန်ပီယံရှစ် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၂ တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်၌ မလေးရှားနိုင်ငံမှ Lee Zii Jia နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ Shesar Hiren Rhustavito တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေသည်ကို ဧပြီ ၂၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ ၌ ကျင်းပသော အာရှချန်ပီယံရှစ် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၂ တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်၌ တရုတ်နိုင်ငံမှ Weng Hongyang နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ Kidambi Srikanth တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေသည်ကို ဧပြီ ၂၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
(English Version)(1) Anthony Sinisuka Ginting of Indonesia hitsareturn during the men’s singles 2nd round match against Nishimoto Kenta of Japan at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
(2) Anthony Sinisuka Ginting of Indonesia hitsareturn during the men’s singles 2nd round match against Nishimoto Kenta of Japan at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
(3) Liu Yuchen (R)/Ou Xuanyi of China compete during the men’s doubles round of 16 match against Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto of Indonesia at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
(4) Nishimoto Kenta of Japan hitsareturn during the men’s singles 2nd round match against Anthony Sinisuka Ginting of Indonesia at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
(5) Anthony Sinisuka Ginting of Indonesia hitsareturn during the men’s singles 2nd round match against Nishimoto Kenta of Japan at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
(6) Watanabe Yuta (R)/Higashino Arisa of Japan celebrate during the mixed doubles 2nd round match against Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han of Singapore at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
(7) Watanabe Yuta (R)/Higashino Arisa of Japan celebrate during the mixed doubles 2nd round match against Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han of Singapore at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
(8) Anthony Sinisuka Ginting of Indonesia hitsareturn during the men’s singles 2nd round match against Nishimoto Kenta of Japan at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
(9) Lee Zii Jia of Malaysia competes during the men’s singles round of 16 match against Shesar Hiren Rhustavito of Indonesia at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
(10) Weng Hongyang of China competes during the men’s singles round of 16 match against Kidambi Srikanth of India at the Badminton Asia Championships 2022 in Manila, the Philippines, April 28, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)